Sidee Sunaami u dhacdaa | Saadaasha Shabakadda
Tsunamis waa dhacdooyin wax burburin kara awood u leh inay daqiiqado gudahood ku baabi'iso dhammaan magaalooyinka xeebta ku yaal. Waa mowjado taxane ah oo ka dhasha badweynta sababo la xiriira dhulgariir, dhul go'id, qaraxyada fulkaanaha ama saameynta asteroid.
Hadaad rabto inaad ogaato sida tsunamis u dhaco, ka dib waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa wax kasta oo la xiriira ifafaalahan.
1 Waa maxay tsunamis?
2 Sidee loo soo saaraa?
Waa maxay tsunamis?
Kuwa jecel inay dabaasha ku faafaan had iyo jeer waxay raadinayaan mowjadda ugu wanaagsan ee "ay ku guuleystaan", iyagoo ku raaxeysanaya badda iyo xaaladeeda. Si kastaba ha noqotee, tsunami ma aha ciyaar. Dhacdadani waxay si fudud u dili kartaa dhowr iyo toban qof, sidoo kale midkii ka dhacay 2004 Badweynta Hindiya, oo sababay dhimashada Dadka 436.983.
Mawjadaha ifafaalahan ayaa si fudud u cabbiri kara wax ka badan 100km dherer, dherer ah illaa 30 mitir, kuna socdaala xawaare dhan 700km / saacaddii, sidaa darteed waa inaad ka fogaataa iyaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Sidee loo soo saaraa?
Sidii aan soo sheegnay, waxaa loo soo saari karaa dhowr siyaabood:
Dhulgariirrada biyaha hoostooda: dhaqdhaqaaqyadan dhul gariirku waxay ka dhashaan dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic ee ka jirta Dunida. Marka sidaas la samaynayo, biyaha dusha sare ayaa kor u kaca kuna dhaca natiijada dhulgariirka laftiisa iyo xoogga culeyska. Dhanka kale, biyuhu way socdaan iyagoo isku dayaya inay gaaraan meel deggan.
Dhul gumaadka badda gujis: Tsunamis sidoo kale waxaa lagu abuuri karaa natiijada ka dhalata badda.
Qaraxyada folkaanaha hoostooda: Fulkaanaha hoostiisa waxay soo saari karaan xoog ku filan si ay u abuuraan saf ballaaran oo biyo ah oo dhali doona dhacdooyinkan.
Saamaynta AsteroidDhagaxyadan waaweyn, ee nasiib wanaag gaadhay meeraha in yar, ayaa khalkhal geliya biyaha dusha sare. Tamarta ayaa ah in Sunaamis muhiim ah la soo saari karo.
Waxaan rajeyneynaa inaad waxbadan ka baratay dhacdooyinkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee tsunami u dhacdaa
Waa maxay cadaadiska Hawada iyo sidee u shaqeeyaa?